Nahandron’i Amerika Atsimo vitsivitsy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Septambra 2018 4:33 GMT
# 1: Avy any Colombia: Nika's Culinaria mizara nahandro matsiro ahitana sary tsirairay amin'ny dingana fikarakarana nahandro Kolombiana nentim-paharazana: Arepa de Huevo (Arepa miaraka amin'ny atody)
Ny traikefako voalohany tamin'izany dia raha nitsidika an'i Colombia izahay 25 taona lasa izay.
Tahaka ny any amin'ny firenena Amerikana Latina hafa, mivarotra karazan-javatra rehetra ireo mpivarotra an-dalambe. Nandeha an-tongotra tany Bogota, Colombia izahay ary teny an-tsisindalana ara-bakiteny, nisy ity vehivavy lehibe ity nipetraka teo akaikin'ny vilany goavambe tahaka ny wok izay feno menaka mafana mangotraka. Manana atody am-polony sy arepas koa izy. Tsy tena fantatro izay nantenaina raha niditra izahay. Nijery azy nanapaka arepa lehibe aho … Vakio ny lahatsoratra manontolo!
# 2: Avy any Ekoadaoro: Erin ao amin'ny Ecuador and Elsewhere mizara ny traikefany amin'ny sakafo Ekoadaoreana, indrindra fa ny “Ceviche,” tamin'ny fijanonany tany amin'io firenena Amerikana Atsimo io, nandritra ny(IVP) (Fandaharan'asa Iraisampirenena ho an'ny Mpilatsaka an-tsitrapo) voalohany tao Ekoadaoro.
Here I am below, enjoying my first crab-ceviche, which is now my favorite of the Ecuadorian ceviches. Ceviche is usually seafood, “cooked” and marinated in lime juice. The Ecuadorian ceviche is served as a kind of soup, with tomato, onion, and limes and “chifle” (fried plantain chips) on the side. That was the second meal of the day (after breakfast…. and would be one of four!!… and I thought I ate too much in the US on Thanksgiving!). Read more…
Eto ambany aho, mankafy ny foza ceviche-ko voalohany, izay anisan'ny ankafiziko ankehitriny amin'ireo ceviches Ekoadaoreana. Matetika sakafon-dranomasina ny Ceviche, “nahandroana” ary nalona tamin'ny zava-pisotro voasarimakirana maitso. Aroso miaraka amin'ny karazana lasopy, misy voatabia, tongolo, sy voasarimakirana maitso ary “chifle” (frity akondrolahy manify) eo anilany ny ceviche any Ekoadaoro. Io no sakafo faharoan'ny andro (taorian'ny sakafo maraina …. ary mety ho iray amin'ireo sakafo efatra !! … ary nihevitra aho fa nihinam-be loatra tao Etazonia tamin'ny Thanksgiving!). Raha hamaky bebe kokoa…
# 3: Avy any El Salvador: Gluten Free by the Bay kosa mitantara ny fomba nahatonga azy ho mpankafy ny Pupusas Salvadoreana: Ny andro nahatonga ny tranoko ho Pupuseria! Fantaro ny fomba fikarakarana Pupusas de Queso y Frijoles Refritos, ary koa ny tsiron'ny Curtido de Repollo.
Niaina tetibola kely teo amin'ny 1.65 dolara fotsiny aho, ny pupusas no sakafo mora indrindra sy sakafo mahafa-po hitako. Tsaroako ny famakiana lahatsoratra iray nilaza fa ny fitsipika momba ny fanaovana sakafo pupusas dia”iray amin'ny sakafo maivana, roa amin'ny sakafo atoandro, telo amin'ny sakafo hariva.” Toa mety amiko izany. Mora ny latsa-pitiavana amin'ireo tortillas katsaka matevina El Salvadoreño vita avy amin'ny “masa harina”, nosisihana fromazy, tsaramaso na hena ary nampiana salady antsoina hoe curtido.
Tamin'ny faran'ity herinandro ity, nanjary orinasa fanaovana pupusa ny tranoko. Tonga mba hisakafo hariva ny namako Melanie, ary nihinana pupusas con curtido de repollo hatrany izahay. Nofenoiko fromazy azo avy amin'ny osy sy cotija izany, ary ny hafa kosa nosisihana fromazy sy tsaramaso natao frity. Vakio ny momba izany…
#4: Avy any Nicaragua, American in Nicaragua manoratra momba ny vola dolara an-tapitrisany laniana isan-taona amin'ny fandalinana ny fahantrana ao Nikaragoà, fa tsy mampiasa io vola io hanomezana sakafo ny olona sahirana.
Tokony ho 4 taona lasa izay, nisy FTMF=ONG tonga tany Nikaragoà mba hanao fikarohana goavana momba ny sakafo hohanin'ny olona any Nikaragoà, inona no sakafo mahazatra isan'andro.
Hitan'izy ireo fa nihinana tsaramaso sy vary amin'ny sakafo maraina ary tsaramaso sy vary amin'ny sakafo antoandro ary gallo pinto amin'ny sakafo hariva ny ankamaroan'ny olona. Ankehitriny, ny teny gallo amin'ny teny espaniola dia midika hoe “akoho”, noho izany dia nieritreritra ireo olona nanao ny fikarohana fa misakafo tsara kokoa ny olona mihinana izany amin'ny sakafo hariva, satria nihinana gallo izy ireo. Nefa ny gallo pinto dia vary sy tsaramaso natambatra.
Noho izany, ny vola dolara an-tapitrisany nolaniana tamin'ity fikarohana ity, ny vokatra azo dia mihinana vary sy tsaramaso matetika ny olona eto Nikaragoà. Nety nilaza tamin'izy ireo izany maimaim-poana ny rehetra. Vakio ny tantara manontolo izao…
#5: Avy any Brezila, Brazilian Food Love: fantaro ny Maracujá, sy nahandro tena tsy manam-paharoa raha hikarakara ny Cocada de Maracujá.
Any Brezila, dia misy karazana voankazo be ranony 150 karazany mahery, 60 amin'izy ireo no azo hohanina ary ny ambiny kosa ampiasaina amin'ny fikarohana ara-pitsaboana samihafa. Ahitana carbohydrates, vitamina A,B,C, kalsioma sy mineraly lehibe ary vy ny voankazo be ranony. Ny ranom-boankazo vita amin'ny voankazo be ranony dia mampitony sy manala fanaintainana. Ny dite vita amin'ny ravina ranom-boankazo be ranony dia afaka manasitrana ny vokatry ny aretina.